လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရကြီးတွင် တာဝါတိုင်များ စစ်ဆေးပေးရသူများ - Xinhua News Agency
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရကြီးတွင် တာဝါတိုင်များ စစ်ဆေးပေးရသူများ
ရှီက နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စည်းမျဉ်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြား
ဝူးလူမုချီ၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံရှင်းကျန်းဝေဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ အကြီးဆုံး သဲကန္တာရကြီးဖြစ်သည့် တာ့လီမခန်းသဲကန္တာရ တွင် တည်ဆောက်ထားသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးတာဝါတိုင်ကြီးများရှိရာသို့ သွားရောက်ကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ရသည့်လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများအား ရိုက်ကူးထားသောရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလိုင်းများအား ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရသည့်ပညာရှင်အဖွဲ့သည် အပူချိန် ၄၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိသည့်နေရာတွင် ၃၃၁ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးအထိ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းများ စစ်ဆေးရန် သဲကန္တာရအတွင်းရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်းကျန်းဒေသတွင်ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် Qiemo ဒေသခံပြည်သူများလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ထိုသို့စစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းများထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Ehmet Tohti က “နွေရာသီစကတည်းက သဲကန္တာရမှာ အပူချိန်က တိုးသထက်တိုးလာနေတာပါ၊ ဒီတော့ ဓါတ်အားလိုင်းတွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ရသူတွေအဖို့ သိပ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုများပြားတာပေါ့၊ အခုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းသာမိုမီတာမှာ အပူချိန်ဟာ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်နေပါပြီ ၊ ကျွန်တော့်ခြေဖဝါးတွေမှာလည်းသဲအပူလောင်နေပါပြီ၊ တာဝါတိုင်တွေပေါ်ကိုတက်ပြီးစစ်ဆေးရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့လက်အိတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ရပါတယ်၊ အဲဒီလိုမှ မဝတ်ရင် လက်တွေအကုန် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအပူလောင်သွားမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့တစ်လ ကို တစ်ကြိမ် သဲကန္တာရကိုလာရပါတယ်။ ဒါဟာတစ်နေ့ကို ၁၀ ကီလိုမီတာကျော်လောက်လမ်းလျှောက်ရတာနဲ့ညီမျှပါတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော် ၂၂၀ ကီလိုဗို့ထ်အားရှိတဲ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလိုင်းနဲ့ တာဝါတိုင်ပေါင်း ၈၆၅ တိုင်ကိုစစ်ဆေးရတာပါ။” ဟုဆိုသည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းများထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Wei Xiaojun က “ဒီမှာတကယ်ပူပြီးတော့ ချွေးတွေလည်းအများကြီးထွက်တာပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လုံနိုင်သလောက်လုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပြီးသွားလာနေရပါတယ်။ နောက်ပြီး အပူရှပ်မှာစိုးလို့ ဆေးတွေ ကိုလည်းမဖြစ်မနေယူလာခဲ့ရပါတယ်။
ရေကိုတစ်ခါထဲအများကြီးမသောက်နိုင်တာကြောင့် လုံလုံလောက်လောက်ထည့်လာရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဓါတ်အားလိုင်းစစ်ဆေးရေးမှာ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးလုပ်ဆောင်ရပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ Gobi သဲကန္တာရမှာ ၁၂ ကီလိုမီတာခန့် တာဝါတိုင် ၂၅ ခုကို စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီမှာတော့အပူပြင်းလွန်းတာကြောင့် ၇ ကီလိုမီတာလောက် နဲ့ တာဝါတိုင် ၁၅ တိုင်လောက်ကိုပဲ စစ်နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သက်လုံအားကို ၃ ဆလောက်တင်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့ဗျာ”ဟုဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Electricians work in China’s largest desert amid heatwave to ensure stable power supply for Xinjiang
URUMQI, July 12 (Xinhua) — A group of pylon maintenance technicians has worked in temperatures climbing to 46 degrees Celsius in the heart of Taklimakan, China’s largest desert located in the southern part of Xinjiang Uygur Autonomous Region, to ensure power supply amid heatwaves.
In 2010,a331-kilometer power transmission line was built to generate electricity for an oilfield and the people in the county of Qiemo. Since then, Ehmet Tohti and his team have been responsible for the maintenance work.
In the past 11 years, Tohti and his team have solved deficiencies and removed dangers in as many as 714 places on the high-voltage pylons by traveling 42,699 kilometers.
လမ်းပေါ်တွင်သတိလစ်သွားသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲအား ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းကယ်တင်
ကင်ညာသမ္မတက နိုင်ငံအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီတည်ဆောက်နေသည့် ရေလှောင်တမံစီမံကိန်း တိုးတက်မှုရှိကြောင်း ပြောကြား